သရေစာစားခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ - Hello Sayarwon
သရေစာ စားတဲ့ အလေ့အကျင့်ဟာ ကောင်းကျိုးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကလေးရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။
သရေစာတွေဟာ ကလေးတွေကို ဗိုက်ပြည့်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာစားချိန်တွေမှာ ဗိုက်မဆာဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဒီသရေစာတွေထဲမှာ အစားအစာနဲ့ အာဟာရဓါတ်လုံလောက်စွာ ပါဝင်ခြင်း မရှိတာကြောင့် သိပ်မကြာခင်မှာ ဗိုက်ပြန်ဆာနိုင်ပါတယ်။
သရေစာ စားခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ သူဟာ အစားအသောက်နှင့် သက်ဆိုင်သော မူမမှန်ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရေစာစားခြင်းဟာ အလွန်အမင်း စားခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ ဒီပြဿနာရှိပြီဆိုရင် သူဟာ သူစားနေကျအစာတွေရဲ့ ပမာဏကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့ပြင် သင့်ကလေးမှာ ဒီပြဿနာ ကို အချိန်တော်တော်ကြာမှ သိရှိရတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို ကုသဖို့ ဆိုရင်တော့ အချိန်ပိုမို ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
အစာချေဖျက်မှု ဆိုင်ရာ ရောဂါများ
အစာကြီးတွေ စားချိန်တွေ ကြားမှာ သရေစာစားရင် သင့်ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ဒီလိုအကြာကြီး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ကလေးမှာ အစာချေစနစ်ဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေကတော့ ကိုယ်ခန္ဓါက အစားအစာတွေက အာဟာရဓါတ်တွေ စုပ်ယူဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သရေစာ အရမ်းစားရင် အစာချေစနစ်ပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်ရုံသာမက သင့်အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်တွေပေါ်မှာလည်း ဖိအားသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာလည်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေဟာ လူကြီးတွေလောက် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးတာကြောင့် ပိုတောင် ဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဆက်တိုက် သရေစာစားသောက်ခြင်းကြောင့် သူတို့ဟာ ဆက်တိုက် ဖိအားကို ခံနေရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ အဆိပ်သင့်စေတဲ့ အရာတွေ စုပြုံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားခြင်း
သရေစာ စားသောက်စဉ်မှာ လူတွေဟာ ကိုလက်စထရော များတဲ့ အသင့်စားအစားအသောက်တွေကို စားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါဟာ သွေးကြောတွေ အတွက် မကောင်းပါဘူး။ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေ စုပြုံခြင်းဟာ သွေးကြော ပိတ်ခြင်းနဲ့ နှလုံးထိခိုက်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း တိုးမြင့်နိုင်ပြီး ရောဂါရနိုင်ခြေ နှစ်ဆ တိုးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓါ ပင်ပန်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု အားနည်းခြင်း
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သရေစာအများစုမှာ တေ့ွရတဲ့ acrylamide ဓါတ်ပစ္စည်းဟာ ကင်ဆာ ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ စားသုံးသူကို မောပန်းစေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့ကျစေပါတယ်။ အခြား ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ပျို့အန်ခြင်း၊ မထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ချွေးထွက်ခြင်း၊ ဆီးသွားခြင်း၊ ကြွက်သား နာကျင်ခြင်း၊ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လေ့လာမှုတွေက ဒီအရာဝတ္ထုဟာ အမျိုးသား မျိုးပွားစနစ်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်တွေကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးလို့၊ ပျင်းလို့၊ စိတ်ရှုပ်လို့ စသည့် မည့်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲ သရေစာစားစား ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးဟာ အစာကို လျင်မြန်စွာစားရင် သူတို့ကိုယ်ခန္ဓါဟာ ကယ်လိုရီတွေ ပိုမို ရရှိတာမို့ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာပါ လိမ့်မယ်။ ကယ်လိုရီများတဲ့ အစာတွေ ဖျော်ရည်တွေဟာလည်း ကိုယ်ခန္ဓါအတွက် ပြဿနာ အတော်များများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အလွန်အကျွံစားခြင်းဟာ သွားပိုးစားခြင်းကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားကြားအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အက်ဆစ်ထုတ်ဖို့ အချိန်ပိုရပြီး သွားကို ပျက်စီးစေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ များသောအားခြင့် စေးကပ်တဲ့ မုန့်တွေဖြစ်တဲ့ကပ်စီးနှဲ နဲ့ ချောကလက်တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Bad Effects of Snacking. http://healthyeating.sfgate.com/bad-effects-snacking-3832.html. Accessed on December 8, 2016
–5Harmful Effects of Junk Food. http://food.ndtv.com/lists/the-bad-the-worse-5-ways-junk-food-can-mess-with-your-brain-764392. Accessed on December 9, 2016